वडा र पालिकामा आफ्ना मान्छे नपरेपछि ओलीसँग बादल फायर ! – GALAXY
वडा र पालिकामा आफ्ना मान्छे नपरेपछि ओलीसँग बादल फायर !
काठमाडौ- पछिल्लो समय नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी पृष्ठभूमिका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’बीच दूरी बढेको छ । एमालेको वडा र पालिका अधिवेशनमा आफ्नो पक्षका नेता कार्यकर्ताहरू नेतृत्वमा नदेखिएपछि बादल ओलीसँग रुष्ट बनेका हुन् ।
बादलनिकट स्रोत भन्छ – ‘सर्वसम्मत गराउने नाममा अधिवेशन भएका सबै वडा र पालिकामा ओली पक्षकै नेता कार्यकर्ताहरूले नेतृत्व लिएका छन् । यसलाई नेकपाकै निरन्तरताका रूपमा बुझ्न सकिन्न । एकता भएको हो भने हाम्रो सम्मानजनक स्थान हुनुपर्छ ।’
वडा अधिवेशनको नतिजा आएपछि बादल ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए । सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने नाउँमा ओलीका मान्छे मात्र नेतृत्वमा आएको भन्दै उनले असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए ।
एमालेले गत कात्तिक ६ गते एकैदिन ६ हजार भन्दा बढी वडामा अधिवेशन गरेको थियो । तीमध्ये मुश्किलले एकाध वडामा मात्र बादल पक्षका कार्यकर्ताले नेतृत्व गरेका छन् । बाँकी वडामा यही कात्तिक १५ गतेभित्र अधिवेशन गरिसक्ने एमालेले बताएको छ ।
त्यस्तै कात्तिक ९ गतेबाट एमालेको पालिका अधिवेशन शुरू भएको छ । पालिका अधिवेशनबाट आएका नेतृत्व पनि सबै ओली पक्षकै छन् । आफूनिकट नेता कार्यकर्तालाई कुनै भूमिका नदिएको भन्दै बादल ओलीसँग रुष्ट भएका हुन ।
उसो त बादलनिकट मात्र होइन, पूर्व माओवादी अन्य नेताहरूनिकट नेता कार्यकर्ता पनि अधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएका छैनन् ।
ओलीले बादल लगायत पूर्व माओवादी समूहलाई कुनै स्थान दिएका छैनन् । त्यस्तै एमालेकै तेस्रो धारका रूपमा चिनिने नेताहरूको पक्षमा पनि अधिवेशन भएको छैन । सुदूरपश्चिममा भीम रावलले अधिवेशन भएकै थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । एमालेले यही मङ्सिर १० देखि १२ सम्म चितवनमा दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजना गर्दैछ ।